वोमी माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कहिलेदेखि हकप्रद आउँदै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » वोमी माइक्रोफाइनान्सको हकप्रद सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन, कहिलेदेखि हकप्रद आउँदै ?
काठमाडौं - वोमी माइक्रोफाइनान्सको ३०% हकप्रद सेयर सुरक्षित गर्न बिहीबार अन्तिम मिति रहेको छ । जेठ १६ गतेदेखि असार १९ गतेसम्म कम्पनीले १०ः३ अनुपातमा २ लाख ३३ हजार २८० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । जसको लागि कम्पनीले शुक्रबार बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी १० करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।